China 7 Axis Robotic Arc Welding Workstation Manufacturer na Supplier | Yunhua
7 Axis robotic aaki ịgbado ọkụ ojii bụ otu kọmpat nhazi maka ịgbado ọkụ, nwere ike iji maka ụgbọ ala akụkụ ahụ mapụtara, ịnyịnya ígwè, electro ụgbọ ala, ọgwụ na ahụ ike na akụrụngwa, mma na akụrụngwa, fencing, igbapu cover, ugbo igwe na anụmanụ.
Robot ga-ejikọ ya na eriri dị na mpụga ka enwere ike ịfefe ọtụtụ ọnọdụ dị mma maka ịgbado ọkụ.
Typicallọ ọrụ a na-arụ ọrụ ịgbado ọkụ dị kọmpat, ngwa ngwa, njikwa dị mfe.
Na akpaaka na-agbanwe agbanwe, ígwè ọrụ mmepụta ihe so na ihe ndị kachasị mkpa. Ha na-ekwe ka usoro akpaghị aka gbanwee ngwa ngwa. YOO ọrụ robot na-arụ ọrụ robot na akụrụngwa akụrụngwa ya na-eme ka usoro na ọrụ ga-ekwe omume nke achọrọ na mmepụta ụlọ ọrụ maka inye ọrụ na ngbanwe nke sel ọrụ ọrụ robot. Ọbụna maka mgbanye mgbatị, ọ bụ obere ọdụ ọrụ nke ndị ọrụ nwere ike ịnabata.
Oke ngwaahịa & nkọwa
YOO obi 7 Axis Robotic ịgbado ọkụ workstation bụ ihe kasị mma anyị na-ere ákwà, ma ọ bụrụ na ọrụ gị ibe adịghị mgbagwoju anya, a workstation ga-enyere gị ọsọ ọsọ gị arụpụtaghị. Stationlọ ọrụ a gụnyere otu robot mgbanaka mgbakasị 6, ike ịgbado ọkụ, otu ọnọdụ axis na ụfọdụ ngwa ọrụ ndị ọzọ bara uru. Ozugbo ị natara otu a, robot nwere ike ịrụ ọrụ mgbe plọg niile gasịrị. Anyị nwekwara ike ịnye gị ihe mgbochi dị mfe ka ị nwee ike ịkwado ọrụ mpempe akwụkwọ na ngwa ngwa.
YOO HEART ụlọ ọrụ nwere ike inye ndị ahịa okwu dị iche iche nke nnyefe. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ ụgbọ mmiri site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku dị ka mkpa ngwa ngwa. YOO obi robot nkwakọ ikpe nwere ike izute oké osimiri na ikuku ibu chọrọ. Anyị ga-akwadebe faịlụ niile dị ka PL, akwụkwọ asambodo, akwụkwọ ọnụahịa na faịlụ ndị ọzọ. Onwere onye oru ya nke oru ya n’ile anya na enwere ike inye onye obula o bula n’ime uzo ahia ndi ahia n’enweghi nsogbu n’ime ubochi iri abuo.
Ọ bụla ahịa kwesịrị ịma YOO HEART robot ọma tupu ha azụ ya. Ozugbo ndị ahịa nwere otu robot YOO HEART, onye ọrụ ha ga-enwe ọzụzụ ụbọchị 3-5 n'efu na ụlọ ọrụ YOO HEART. A ga-enwe weChat otu ma ọ bụ whatsapp otu, anyị technicians ndị na-ahụ maka mgbe ire ọrụ, eletriki, ike ike, software, wdg ga-adị. Ọ bụrụ na otu nsogbu emee ugboro abụọ, anyị technician ga-aga ahịa ụlọ ọrụ na-edozi nsogbu. .
Q1.How ọtụtụ mpụga axis nwere ike YOO OKWU robot tinye?
A ugbu a, YOO OKWU robot nwere ike tinye 3 ọzọ mpụga axis ka robot nke nwere ike imekota na robot. Nke ahụ bụ ịsị, anyị nwere ọdụ ọrụ ọrụ mgbatị na ọdụ 7, 8 isi na 9 axis.
Q2. Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinyekwu axis na rọbọt ahụ, ọ̀ dị nhọrọ ọ bụla?
A. you ma PLC? Ọ bụrụ na ịmara nke a, anyị robot nwere ike ikwurịta okwu na PLC, wee nye akara ngosi na PLC iji chịkwaa mpụga axis. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịgbakwunye 10 ma ọ bụ karịa axis mpụga. Nanị ụkọ nke ụzọ a bụ na axis mpụga enweghị ike ijikọ na robot.
Q3. Kedu otu PLC si akpọrọ robot?
A. Anyị nwere bọọdụ / ụlọ na njikwa njikwa, enwere ọdụ ụgbọ mmiri 22 na ọdụ ụgbọ mmiri 22, PLC ga-ejikọ bọọdụ I / O wee nata akara sitere na robot.
Q4. Anyị enwere ike itinyekwu ọdụdụ I / o?
A. N'ihi na nanị weld ngwa, ndị a I / O mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ ezuru, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ, anyị nwere m / O ịgbasa osisi. Nwere ike ịgbakwunye ntinye 22 na mmepụta ọzọ.
Q5. Kedu ụdị PLC ị na-eji?
A. Ugbu a, anyị nwere ike ijikọ Mitsubishi na Siemens yana ụfọdụ ụdị ndị ọzọ.
Nke gara aga: 8 Axis Robotic Welding Workstation na Ọnọdụ abụọ